लक्ष्य मिल्ने हुनाले नै हामीले मधेशमा तालमेल गरेका हौँ :फोरम नेपाल उपाध्यक्ष हेमराज राई -
१७ कार्तिक २०७४, शुक्रबार १२:४३ 1022 पटक हेरिएको
आसन्न निर्वाचनमा कुनै पार्टीसँग तालमेल गरेर जाँदै हुनुहुन्छ कि एक्लै ?
– पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावित लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्ने जुन प्रस्ताव छ, त्यो प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य घटकहरूसँग गठबन्धन भन्दा पनि चुनावी तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने हामिले नीति लिएका छौँ । यस सन्दर्भमा पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा पहिलो चरणमा कुराकानी भएका छन् । यसमा नेपाली कांग्रेस उदार स्वभावको हुनुपदर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ थियो तथापी एउटा जिल्लामा बाहेक अन्य जिल्लाहरूमा चुनावी तालमेल हुन सकेन । भोजपुर जिल्लामा बाहेक अन्य जिल्लाहरूमा चुनावी तालमेल हुन नसके पनि हामी यसको प्रयासमा छौँ । अहिलेको हाम्रो चाहना भनेको विगतमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा जारी भएको वर्तमान संविधानलाई संशोधन गर्न चाहने सबै राजनीतिक दलहरूसँग मोर्चाबद्ध भएर निर्वाचनमा जाने हाम्रो प्रस्ताव थियो तथापी त्यो प्रस्तावलाई ढिलो भएको हुनाले त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौँ । जसले गर्दा एमाले र माओवादी वाम गठबन्धनमा जान पुगे ।
० पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य दलहरूसँग पनि चुनावी तालमेल गर्न सकिन्छ कि ?
– नेपाली कांग्रेससँग हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका थियांै कि अहिलेको सन्दर्भमा एमालेले वाम गठबन्धन गरेर अगाडी गएको अवस्थामा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्व प्रस्ताव गर्ने राजनीतिक दलहरूले चुनावी तालमेल गर्न आवश्य छ । कांग्रेससँग पक्षमा रहेको राजनीतिक दलले पहाड र तराईमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भनेको संघिय समाजवादी फोरम नै हो । त्यसैले संघीय समाजवादी फोरमसँग पहाड, हिमाल र तराईमा चुनावी तालमेल गर्दा नै उसलाई सबैभन्दा बढी फाइदा हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । यद्यपी उसले यसलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ । निर्वाचन उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय बाँकी नै छ । यसमा हाम्रो प्रयास जारी नै छ । यसमा उहाँहरूको सकरात्मक कदम चालिनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ ।
० बाम गठबन्धनसँग तालमेल गर्ने केहि सोच छ कि लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँग मात्र गर्ने विचार छ ?
– हामीले लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरूसँग मुलतः नेपाली कांग्रेससँग नै तालमेल गर्ने सोचेका छौँ । यसको अर्थ हामी अन्य राजनीतिक दलसँग गठबन्धनमा रहेको दलसँग नभई त्यहाँ भित्र रहेको अलग–अलग घटकहरूसँग तालमेल हुने सम्भावना रहन्छ भने तालमेल गर्नका लागि हामी तयार रहेको छौँ ।
० त्यसको लागि कुनै दलसँग छलफल भएको छ ?
– चुनावी तालमेलको लागि छलफल भएको थियो ।
० कुन दलसँग भएको थियो ?
– छलफल भन्दा पनि नेकपा माओवादीले एकपटक अलगै ढंगले प्रस्ताव ल्याएको थियो तर प्रस्ताव आए पनि लामो समयसम्म त्यो सम्बन्धमा छलफल हुन सकेन । त्यस्तै त एमालेले पनि प्रस्ताव नल्याएको होइन तर पछिल्लो समयमा उहाँहरूकै तर्फबाट त्यसलाई विस्तापित गर्ने काम भयो ।
० एमालेसँग एक चरण कुरा भएपनि तपाईहरूलाई एमालेसँग तालमेल गर्ने रूची नभएको हो ?
– राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग हाम्रो लक्ष्य मिल्ने हुनाले नै हामीले मधेशमा तालमेल गरेका हौँ ।
० विगतका निर्वाचनमा फोरम नेपालले पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा राम्रो मत ल्याउन सकेन, अब हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा धेरै मत ल्याउनका लागि कस्ता रणनीतिहरू बनाइरहनुभएको छ ? बिगतमा के कमजोरी भयो र अहिले त्यसलाई कसरी सच्याउँदै हुनुहन्छ ?
– हामी चुनावी तालमेल नभएका जिल्लाहरूमा आफ्नै संगठनको बलमा अगाडी बढाउनेछौँ । हामी हाम्रा मुद्दाहरूलाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउनेछौँ र हामीलाई विश्वास छ पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा आदीवासी, जनजाति र खस समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र हो । उनीहरूको अधिकार, पहिचान र राज्यमा प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर हामी हाम्रा मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउँनेछौँ । त्यो मुद्दालाई अगाडी बढाछौं, त्यो समुदायहरूमा विश्वास जित्दै हामी निर्वाचनको तयारीमा लाग्छौं ।
० विगतमा संविधान संशोधनमा समर्थन गर्ने माओवादी अहिले संविधान संशोधनको विरोध गर्ने पार्टी एमालेसँग गठबन्धमा छ अबको दिनमा संविधान संशोधनको विषयमा माओवादी केन्द्रको भूमिका कस्तो होला ?
– नेकपा माओवादीको भूमिका पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि नै शंकास्पद रहेको थियो । पहिलो संविधानसभामा उहाँहरूकै नेतृत्वमा रहेको सरकारबाट त्यो संविधानसभा भंग गरेर पहिचान सहितको संघीयताको मुद्दालाई ल्याउने खालको काम भयो । दोस्रो संविधानसभामा हामीले नेकपा माओवादीलाई संयुक्त भएर चुनावी तालमेल गरेर जानुपर्छ पहिचान सहितको संघीयताको पक्षपोषण गर्ने मधेशी दलहरू र तत्कालिन संघीय समावादी पार्टी लगायतसँग मिलेर अगाडि बढौं भन्दा माओवादीले दम्भ देखायो जसको परिणती दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी लगायत पहिचानवादीहरूको हार भयो । त्यसपछि हामीले ३१ दलिय मोर्चा बनाएर संघर्षलाई अघि बढायौं यो सन्दर्भमा पनि उहाँहरूले हामीलाई धोका दिनुभयो र नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको मोर्चामा आबद्ध भएर वर्तमान संविधान जारी गर्ने खालको काम भयो । यो वर्तमान संविधान नेपाली जनताको र २०६२÷६३ को जनक्रान्तिको मर्म विपरीत अन्तरिम संविधानले दिएको भावना विपरित घोषणा भएको छ । जसले उत्पीडित जात, धर्म, लिंग, क्षेत्रहरूको हक अधिकारलाई स्थापित गर्न सकेन । पहिचानलाई इन्कार गर्ने काम भएको छ । माओवादीले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेर विगतका कमीकमजोरीलाई सच्चायाउने प्रयास त गरेको थियो तर निर्वाचनको समयमा पहिचान विरोधी र संविधान संशोधन विरोधी नेकपा एमालेसँग मोर्चाबन्दी गरेर फेरि उत्पीडित नेपाली जनतामाथि घात गरेका छ माओवादीले ।